फाँसी चढाँईदै गरेकी महिलालाई ‘हार्टअट्याक’, शवलाई दिईयो फाँसी ! « Lokpath
२०७७, ११ फाल्गुन मंगलवार १७:१९
फाँसी चढाँईदै गरेकी महिलालाई ‘हार्टअट्याक’, शवलाई दिईयो फाँसी !
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ फाल्गुन मंगलवार १७:१९
काठमाडौं । इरानमा मृत्युदण्डको प्रतीक्षा गरिरहेकी महिलालाई हृदयघात भएको छ । हृदयघातले उनको मृत्यु हो । इरानमा शरिया कानूनलाई पालना गर्दै उनको शवलाई फाँसी दिइएको छ ।
मृत्युदण्ड दिने बेला महिला उभिएको कुर्सी हटाउने अधिकार पीडितकी आमालाई दिइएको थियो ।
डेली मेलका अनुसार इस्माइलीको त्यति नै बेला मृत्यु भयो । तर उनीहरुले जहराको टाउकोलाई कालो कपडाले बेरिदिएको र उनलाई एउटा कुर्सीमा राखेर डोरी उनको घाँटीमा राखिदिए । त्यसपछि पीडितकी आमा अर्थात् जहराकी सासुले कुर्सी धकेलेपछि उनी झुण्डिइन् ।
काठमाडौँ- जापानको राजधानी टोकियो क्षेत्रमा सङ्कटकालको अवधि फेरि थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री
रोम । इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस इराकका लागि रोमबाट आज (शुक्रवार) त्यसतर्फ प्रस्थान
काठमाडौं । जापानका अर्बपति यासुका मीजावाले चन्द्रमामा निःशुल्क जाने अवसर प्रदान गर्ने भएका
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ महिना यताकै कम